‘मध्य तथा सुदुरपश्चिम स्वर्गको टुक्रा हो, जहाँको कला, संस्कृतिले सबैलाई मोहित पार्छ’(भिडियोसहित)
‘संस्कृतिका माध्यमबाट पर्यटन विकासमा मद्दत पुग्छ’
प्रकासित मिति : २०७६ बैशाख ७, शनिबार प्रकासित समय : १७:०६
(सुदुरपश्चिम क्षेत्रको सुन्दर क्षेत्र अछाममा जन्मेका युवा गायक रुपक परियारले विस २०७१ सालमा स्थानीय कला, संस्कृति समेटिएको गीती एल्बम ‘रामारोशन’ निकाले । उनलाई पहिलो एल्बमले नै लाखौं श्रोताहरुमाझ लोकप्रिय बनायो । उनले केही बर्षपछि पुन नयाँ गीतहरु ल्याउन लागेको बताएका छन । त्यसो त उनको परिचयसँग धेरै कुराहरु जोडिएका छन । उनी २०६५ सालमा रेडियो नेपालले सञ्चालन गरेको भला सुकाली कार्यक्रमको मध्य तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रका सयौं प्रतियोगीता समावेश भएको प्रतिस्प्रधामा पहिलो स्थान जित्न सफल बनेका थिुए । हाल उनी रामारोशन कला संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठानको सचिवको रुपमा समेत कार्यरत छन । उनी स्थानीय कला, संस्कृतिको विकास, संरक्षण र प्रचारबाट विकासमा टेवा पुर्याउन सकिने विश्वास राख्छन । कला, संस्कृति र उनको नयाँ गीतको विषयमा उनीसँगको हरपल संवाद उनले गायन क्षेत्रलााााई निरन्तरता दिने बताएका छन । प्रस्तुत छ उनीसँगको संवादको संवादीत अंश…..)
१) साँगीत प्रेमि दर्शक, श्रोताहरुलाई आफ्नो परिचय कसरी दिनुहुन्छ ?
-मेरो घर अछामको रामारोशन नगरपालिका २, चाफामाण्डौं हो । सानैदेखि मलाई स्थानीय कला, संस्कृतिको गहिरो प्रभाव परेको थियो र सायद त्यसैले होला मलाई साँगीतीक क्षेत्रतिर डोर्यायो । मैले २०७१ सालमा अछामी भाषाको पहिलो पहिलो एल्बम ‘रामारोशन’ निकालेको थिए । तयसमा समावेश भएका चार वटा गीतहरु, जो मध्य तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रको कला, संस्कृतिसँग जोडिएका थिए । त्यसलाई असाध्यै मन पराइदिनु भयो । त्यो श्रोताहरुको मायाले मलाई पुनः नयाँ गीत ल्याउन घच्घच्यायो र फेरी दुईवटा गीतहरु ल्याउने तयारीमा अहिले लागेको छु । अब आउने गीतहरु पनि अछामी संस्कृतिमा रहेका छन ।
२) तपाई रामारोशन संस्कृति संरक्षण केन्द्रको सचिवको रुपमा समेत हुनुहुन्छ, यसले स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण र विकासको पक्षमा के के गरिरहेको छ?
-हामीले रामारोशन क्षेत्रका साथै मध्यसुदुर क्षेत्रको स्थानीय कला, संस्कृतिको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिएका छौ । हामीले कला, संस्कृतको विकास गर्ने सोचले नै त्यो सस्थाको स्थापना गरेका हौं । हामीले स्थानीय क्षेत्रमा चलिआएका देउडा, हुड्के, होरी, पुतला, मारुनी, पञ्चेबाजा जस्ता विभिन्न शैली र परम्पराजन्य कला, संस्कृतिको संरक्षणका लागि विविध कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । त्यसैको निरन्तरतामा स्थानीय कला झल्कने गीत, संगीत र कलाकारहरुलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौं ।
३) तपाईको पहिलो एल्बम्को नाम नै रामारोशन राख्नु भएको छ, यसको सन्दर्भ बताइदिनुस् न ।
-वास्तवमा हाम्रो रामारोशन स्वर्गको एउटा टुक्रा हो । यहाँको प्राकृतिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक सुन्दरताले सबैलाई मोहित गर्छ तर यसको प्रचारमा कमि देखिन्छ, सम्भावना धेरै छन । यस क्षेत्रको बाह्र ताल र अठार खण्डको यो भूमि साँच्चै रमणीय छ । यहाँका किनमुनि ताल, किनमुनि मैदान, रानी मैदान, चाखा डााडा लगायतका धेरै क्षेत्रहरुको प्रचार गर्न सकेमा यसलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न सकिने देखिन्छ । तसर्थ यहाँको सम्भावनालाई संगीतका माध्यमबाट चिनाउने उद्देश्यले मैले यो नाम दिएको हुँ ।
४) अछामी कला, संस्कृतिको विकासमा धेरै कलाकारहरुले भूमिका खेलेका छन । तपाईलाई मनपर्ने कलाकारको को हुनुहुन्छ ? उहाँको एउटा गीत सुनाइदिनुस।
-हाम्रो कला संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा धेरै कलाकारहले भूमिका खेल्नुभएको छ । त्यसमध्ये मलाई आदर्णीय राजामारा भाटको गीत संगीतले प्रभाव पारेको छ । उहाँका सबै गीतहरु मलाई मन पर्छन । वजासतवमा उहाँकै प्रभावबाट म यस क्षेत्रमा उत्प्रेरित भएको हुँ । उहाँ ‘चुरा पोत्या लाउन्या के राम्रो अछामी चलन’ बोलको गीत म यहाँ सुनाउँन चाहन्छु ।
५) तपाई २०७१ पछि साँगीतिक क्षेत्रमा देखिनु भएन । अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
-हजुर, पहिलो एल्बम निकालेपछि म केही व्यवहारीक कामले यतातिर गीत निकाल्न सकिन तर दर्शक, श्रोताको मायाले पुन नयाँ गीतहरु निकाल्ने तयारीमा छु । यतिबेला दुईवटा गीतको रेकर्डिङको काम सकिएको छ, त्यो गतिहरु सायद महिनादिनमै बजारमा आउँछ । मैले यतिबेला ‘घुम्न आईजा रामारोशन’ र ‘हाम्रो संस्कृति’ बोलका दुई वटा गीतहरु ल्याउँन लागेका छु, त्यसको भिडियो समेत निकाल्ने तयारीमा छु तर भिडियो अलिक पछि मात्र हुन्छ ।
६) अमूल्य समय दिनुभयो, तपाईको नयाँ गीतहरुको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौ, अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
-मलाई पनि केही कुराहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद । सथानीय कला, संस्कृतिको संरक्षण र विकासको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहने छ । मैले ल्याउन लागेका गीतहरु सुनेर साथ, सहयोग, प्रतिकृया दिनुहोला भन्न चाहन्छु ।